Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo la kulmay Madaxweynaha Dalka Seychelles – Radio Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo la kulmay Madaxweynaha Dalka Seychelles
Madaxweynaha Dalka Seychelles (Mr. Danny Faure) ayaa Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wafdiga uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Yuusuf Garaad Cumar, waxayna ka wada hadleen arimaha soo socda:
1: Soo celinta Maxaabiista Soomaalida ee ku xiran Seychelles, si kuwa xukumani ugu dhamaystaan Soomaaliya xukunnadooda , kuwa lasii daynayana lagu celiyo dalkooda.
2.Xoojinta iskaashiga Amniga Badda Indean Ocean oo ka dhaxaysa labada dal iyo marinada biyaha ee ganacsiga aduunku isaga goosho, lagana hortago falalka Bucad-badeednimada.
3.In Soomaaliya iyo Seychelles iska kaashadaan dhinacyo kala duwan sida Ganacsiga, Dalxiiska, iyo in Khibradda Seychelles ee xagga badaha loo gudbiyo Soomaaliya.
Dhanka Dalka Seychelles waxaa goob joog ka ahaa kullanka , Xoghayaha Arrimaha Dibadda (Ambassador Barry Faure) iyo madax kale oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Madaxtooyada, dhanka Soomaaliya waxaa goob joog ka ahaa Agaasimaha Waaxda Afrika ee Wasaaradda Arimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga.
Dhamaan arrimahaas wa laysku afgartay, Madaxweynaha Seychelles-na waxa uu bogaadiyay horumarka dhinac kasta ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya gaartay waxa uuna sheegay in Seychelles markasta garab taagan tahay Soomaaliya.
Mareykanka oo Faah faahin ka bixiyay duqeyn lagu dilay horjooge ka tirsan Argagixisada Soomaaliya